Tesla China သည် ၁၀% အလုပ် မှ ထုတ်ပယ် သည် – Pandaily
Tesla China သည် ၁၀% အလုပ် မှ ထုတ်ပယ် သည်
Jun 23, 2022, 22:33ညနေ 2022/06/23 23:05:17 Pandaily
အရSina နည်းပညာကြာသပတေး နေ့တွင် Tesla China သည် ၀ န်ထမ်း ၁၀% ကို အလုပ် မှ ထုတ်ပယ် မည့် အစီအစဉ် ကိုစတင် ခဲ့သည်ဟု သတင်းရင်းမြစ် များစွာ ကပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုကဲ့သို့သော အစီအစဉ်တွင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကဏ္ involve မပါ ၀ င်ပါ။ Tesla China ကေတာ့ ဒီ သတင္းကို တံု႔ျပန္ တာ မရွိေသးပါဘူး။
ဒီ ကိစ္စကို အကျွမ်းတဝင် ရှိ သူတစ် ဦး က ၎င်းသည် တက် စ လာ ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အလုပ် မှ ထုတ်ပယ် ခြင်းအစီအစဉ် ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဇွန်လ ၂၁ ရက်၊မီဒီယာTesla ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Elon Musk က ကာတာ စီးပွားရေး ဖိုရမ် တွင် ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် အချိန်ပြည့် ၀ န်ထမ်းများကို ၁၀% လျှော့ချ မည်ဖြစ်ပြီး အချိန်ပိုင်း ၀ န်ထမ်းများကို နာရီ အလိုက် တိုးမြှင့် မည်ဖြစ်ပြီး ၀ န်ထမ်း များအားလုံးကို ၃-၃. ၅% လျှော့ချ မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်း ၏တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက် တွင် Tesla China သည် မကြာသေးမီက အလုပ်သင် စုဆောင်း မှုကို တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်း အစီရင်ခံစာ များအရ Tesla China သည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ရာထူး များ မှလွဲ၍ အခြား ရာထူး များအတွက် အလုပ် ခန့်ထား ခြင်းကို ဆိုင်းငံ့ ထားခဲ့သည်။ Sina Technology မှ မေလ နောက်ဆုံး အပတ် တွင် Tesla China သည် ထုတ်လုပ်မှု မဟုတ်သော အလုပ် များအတွက် ၀ င်ရောက် ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆိုင်းငံ့ ထားကြောင်း သိရှိရသည်။
ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် နှုတ်ထွက် မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေ မည်ကို စိုးရိမ် သောကြောင့် ကုမ္ပဏီ၏ နှုတ်ထွက် မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော် ရန် ငြင်းဆန် ခဲ့သည်။ “ အလုပ်ဖြုတ် မှုသည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်း မှလွဲ၍ အခြား လုပ်ငန်းဆောင်တာ များစွာ တွင်ဖြစ်ပွား သည်” ဟု သတင်းရပ်ကွက် ကဆိုသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Tesla Shanghai စက်ရုံ ကြီးသည် ပစ္စည်းကိရိယာများ အဆင့်မြှင့်တင် မှုအတွက် နှစ်ပတ် ပိတ် ရန်စီစဉ် ထားသည်
Tesla China မှ ထုတ်ပြန်သော “ အလုပ် မှ ရပ်စဲ ခြင်း အကြောင်းကြားစာ” တွင် ဤသို့ရေးသား ခဲ့သည်-“ ကျွန်ုပ်သည် တတိယ ပါတီ (မီဒီယာ မှလွဲ၍) အား ကုမ္ပဏီနှင့် အလုပ် ခန့်ထား မှု ဆက်ဆံရေးကို အဆုံးသတ် ရန် ဖော်ရွေ စွာ ဆုံးဖြတ် ပြီး ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထိုကဲ့သို့သော ဆက်သွယ် မှုများကို အပြုသဘော ဖြင့် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။။ ငါ Tesla နှင့်၎င်း၏ ပုဂ္ဂိုလ် များ နှင့်ပတ်သက် ။ မှားယွင်းသော သတင်းအချက်အလက် သို့မဟုတ် ယုတ်ညံ့ မှတ် ချက်များ, မှတ်ချက် များသို့မဟုတ် ကောလာဟလ များ တင်, ဖြန့်ဝေ, ကြေညာ သို့မဟုတ် တင်, ဒါမှမဟုတ် အခြား မည်သည့် လမ်း အတွက် Tesla နှင့်၎င်း၏ ပုဂ္ဂိုလ် များ နှိမ် သို့မဟုတ် နှိမ် မည် မဟုတ်ကြောင်း ထပ်မံ အာမခံ ပါသည်။ “
Tags automotive industry | electric vehicle | layoff | tesla
Canalys: ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ လျှပ်စစ် ကား ရောင်းချ မှုသည် ၁၀၉ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ပြီး တစ်ဝက် မှာ တရုတ် တွင် ဖြစ်သည်
တန လာ င်္ နေ့က ထုတ်ပြန် တဲ့ Canalys ရဲ့ အစီရင်ခံစာ မှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ တ ကမ္ဘာလုံး လျှပ်စစ် ကား ရောင်းချ မှုဟာ ၆. ၅ သန်း ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် ထက် ၁၀၉ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက် လာပြီး ခရီးသည်တင် ကား ရောင်းချ မှု အားလုံးရဲ့ ၉ ရာခိုင်နှုန်း ရှိတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Auto Feb 14 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 14, 2022
Tesla ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်ဖြုတ် မှု ၁၀%
Tesla သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူသစ် စုဆောင်း မှုကို ဆိုင်းငံ့ထား ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာသေးမီက Tesla China နှင့်နီးစပ် သော သတင်းရင်းမြစ် တစ်ခုက အလုပ် မှ ထုတ်ပယ် ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံး သတင်းများ ထုတ်ပြန် ခြင်းမရှိ သေးဘဲ အကြီးစား လူသစ် စုဆောင်းမှု ကင် ပိန်း ကို မကြာ မီက ပြုလုပ် ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ကဏ္ဍ ခွဲမထား Jun 06 ဇွန် 6, 2022
တက် စ လာ ရှန်ဟိုင်း စက်ရုံသည် ထုတ်လုပ်မှု ကိုအပြည့်အဝ ပြန်လည်စတင် ခဲ့သည်
Shanghai Gigabit စက်ရုံ ပြန်လည် စတင်ပြီး ကတည်းက Tesla China သည်ကား အစီးရေ ၄၀, ၀၀၀ ကျော် ထုတ်လုပ် ခဲ့ပြီး စွမ်းရည် အသုံးချ မှုနှုန်းသည် ၁၀၀% သို့ပြန် သွားသည်။
ကဏ္ဍ ခွဲမထား Jun 13 ဇွန် 13, 2022
Tesla Global Vice President Grace Tao-ကမ္ဘာ့ ပို့ဆောင် မှု၏ ထက်ဝက် သည် ရှန်ဟိုင်း ရှိ စက်ရုံ ကြီး များမှ ဖြစ်သည်
တနဂၤေႏြေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ Qingdao ႏိုင္ငံ စုံ ကုမၸဏီမ်ား ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲ အြန္လိုင္း မိန္႔ခြန္းတြင္ တက္ စ လာ ၏ ကမၻာ လံုးဆိုင္ရာ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဂ ေရ ႕ စ္ ေတာ အို က ရွန္ ဟိုင္း ၏ ဧရာမ စက္႐ံု ႀကီးသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ လံုးဆိုင္ရာ ပို႔ေဆာင္ေပး မႈ၏ ထက္၀က္ ကို ပံ့ပိုး ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ကဏ္ဍ ခွဲမထား Jun 20 ဇွန် 20, 2022